War deg deg ah: Xassan Daahir oo Cadaado la geeyay iyo khilaaf ka taagan sida laga yeelayo.	| Salaan Media
War deg deg ah: Xassan Daahir oo Cadaado la geeyay iyo khilaaf ka taagan sida laga yeelayo.
Goob-joogayaal Cadaado ku sugan ayaa waxa ay sheegayaan in Magaalada Cadaado ee xarunta maamulka Xibin iyo Xeeb la geeyay Xassan Daahir Aweyn oo habenkii xalay ahaa isu dhiibay ciidan uu hogaminayay madaxweynaha maamulkaasi oo ugu tegay deegaanka dhaca xeebta ee hoos-taga maamulkooda.
Xassan Daahir ayaa waxa la sheegay in la dejiyay guri ku yaalla Cadaado halkaasi oo ay ku ilaalinayaan ciidamo fara badan iyada oo maamulka Xibin iyo Xeeb guud ahaan ay shir deg deg ah oo xaaladiisa looga arinsnaya ay madaxtooyada ku leeyihiin.
Warar hor-dhac aha ayaa waxa ay sheegayaan in maamulku uu isku khilaafsanyahay sida laga yeelayo Xasaan Daahir iyada oo qaarkood ay soo jeedinayaan in uu yahay Maxbuus maadaama la soo qabtay isaga oo hub iyio ciidamo wata halka kuwa kale ay soo jeedinayaan in uusan ahyen maxbuus maadama uu isi soo dhiibay.
Lama oga halka arintu u dhici doonto hasa yeeshee afhayeenka maamulkaasi ayaa horay waxa uu u cadeeyay in ay dowlada Soomaaliya uga danbeyn doonaan arinta oo aysan go’aan iyagu qaada doonin, mana jirto wax war ah oo dowlada Soomaaliya wali kasoo baxay tan iyo markii uu soo baxay hadalka ah in Xassan Daahir uu is-dhiibay 7-sano kadib oo uu duur gal ahaa.